प्रमुख समाचार « Today Khabar
उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकारः निगमले तोक्यो कोटा, कुन सवारीले कित पाउने ?
काठमाडौंः उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव देखिन थालेपछि सरकारले सवारी साधनहरुमा पेट्रोल खपतको कोटा तोकिदिएको छ । सवारी चालकहरुको विरोधका कारण पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्तिमा असहज भएको भन्दै सरकारले सवारी साधनहरुमा
नेकपाद्धारा सातै प्रदेशका इन्चार्ज र अध्यक्ष टुङ्गो लगाए (नामाबली सहित)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश संगठन कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले
सरकारले अब विपल्वको कुनैपनि नेतालाई मुद्दा नचलाउने
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई अदालतले छाड्न आदेश दिए अर्को मुद्दा नलगाउने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । नेकपासँग वार्ताको वातावरण बनाउने तयारीमा
दशैंमा घरजानेलाई दुःखद खबरः दशैंको अग्रिम टिकट नखोल्ने बस व्यवसायीको निर्णय
काठमाडौं । बस व्यवसायीले दशैंको अग्रिम टिकट नखोल्ने निर्णय गरेका छन् । यसअघि आजदेखि टिकट बुकिङ खोल्ने तयारी थियो। नेपालीहरूको चाड दशैँमा घर जाने यात्रु टिकट लिन आज बिहानै नयाँ
काठमाडौंका मेयरको अर्काे चर्तिकलाः सरकारी खर्चमा श्रीमति सहित अमेरिका प्रस्थान
काठमाडौं । सरकारले वेदेशिक भ्रमणमा नियन्त्रण गरेको बताईरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य सरकारी खर्चमा श्रीमती लिएर अमेरिका गएका छन् । महानगरमा सुधारका काम नगरेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएका शाक्य
सिके राउतलाई कारबाही गर्न सांसदहरूको जोडदार माग
काठमाडौं । सांसदहरूले मुलुक विखन्डनको आवाज उठाउनेहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा बोल्दै सांसदले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउने नाममा प्रदेश नम्बर–२ मा मुलुक विखन्डनको कुरा उठेको
काठमाडौँ, ४ असोज (रासस) ः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) नबनाई रुख कटानको काम शुरु नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको
निर्माण व्यवसायीको एकाधिकार अस्वीकार्य : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समृद्धिका लागि निर्माण र उत्पादन कार्य सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले कुनै प्रकारको एकाधिकार (कार्टेलिङ) स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको
सुनसरीमा गोली प्रहार गरी नेताको हत्या, एकजना प्रहरी जवान सख्त घाइते
सुनसरी । सुनसरी स्थित हरिनगर गाँउपालिकामा एक अज्ञात समुहले नेकपाका स्थानिय नेता खुर्सिद आलम अन्सारीको हत्या गरेका छन् । ४ जनाको समुहमा आएका उक्त हत्याराहरुको समुहले अन्धाधुन्ध गोली हानी अन्सारीको
प्रदेश १ मा आठ महिनामा १०१ बालिका बलात्कृत
विराटनगर । प्रदेश नं. १ अन्र्तगतका १४ जिल्लामा आठ महिनाको अवधिमा १०१ जना बालिका बलात्कृत भएका छन् । गत जनवरीदेखि अगष्टसम्मको तथ्यांक हेर्दा बालिका, किशोरी तथा महिलाहरु १०१ वटा बलात्कारको घटना
१४ वर्षीया बालिकाको बलात्कार र हत्या रहस्यमै, पक्राउ परेका पाँचैजनालाई सफाइ
महोत्तरी । सोनमा गाउँपालिका– ८ सिंग्हासिनीकी १४ वर्षीया कविताकुमारी यादवको बलात्कार र हत्या भएको २३ दिन बितिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएका पाँचैजनालाई जिल्ला अदालतले
‘लोकतन्त्रमा हाम्रो पनि अंश छ, माग सम्बोधन नभए मधेसले छुट्टै देश माग्न सक्छ’
वीरगंज। प्रदेश दुईको विभिन्न स्थानमा राजपालगायत दलहरुले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउँदा मधेश आन्दोलनका अगुवाले भने मृत संविधानको पुनर्जीवन खोज्न नसकिने अवधारणा राखेका छन्। राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक
काठमाडौंः उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव देखिन थालेपछि सरकारले सवारी साधनहरुमा पेट्रोल खपतको कोटा तोकिदिएको छ
यातायात मजदुर र सरकारबीच ८ बुदें सहमति, मदजुर गाडी चलाउन सहमत
काठमाडौं । मुलुकी संहिताको विरोध गर्दै आन्दोलित यातायात मजदुर र सरकारबीच सहमति भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश संगठन कमिटीका अध्यक्ष
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई अदालतले छाड्न
काठमाडौं । बस व्यवसायीले दशैंको अग्रिम टिकट नखोल्ने निर्णय गरेका छन् । यसअघि आजदेखि टिकट